प्रकाण्डसँग किन डरायो सरकार ?
सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिदा पनि सरकारले छुट्यो कि पक्राउ गरिहाल्छ प्रकाण्डलाई । प्रकाण्डलाई मुद्दा चलाउनु केही छैन, पक्राउ गर्‍यो थुन्यो । योभन्दा लाचार सरकार अरु कुन हुनसक्ला ? प्रकाण्ड अपराधी हुन् भने उनलाई मुद्दा चलाए त भइहाल्यो । अदालत रिहा गर्न आदेश दिन्छ, रिहा हुनासाथ सरकार फेरि पक्राउ गर्छ । सरकार यति कमजोर, केको कानुनको शासन हो यो ?
नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता हुन् खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड । यिनीमाथि ७ करोड चन्दा उठाएको मौखिक आरोप लगाएको छ सरकारले । नेपाल बन्द लगायतका कार्यमा कानुनविपरित क्रियाकलापको आरोप पनि छ । आरोप लगाउने सरकारले तत्काल उनलाई मुद्दा ठोके त भइहाल्यो । प्रकाण्ड डराउनेवाला छैनन् । तर सरकार उनलाई दु:ख दिने नियतमात्र राखिरहेछ ।
शुक्रवार अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेपछि प्रकाण्डको प्रतिक्रिया थियो– ‘अदालतले आदेश गरेको यो चौथो पटक हो । अदालतको आदेशलाई ओली सरकार र रामबहादुर थापा प्रशासन मान्न तयार छैन । यो नेपाली जनताको सरकार होइन । यो दलाल, भ्रष्ट, माफिया, जनविरोधीहरूको सरकार हो ।’ अदालतले भदौ १, ७, १८, २९ गते आदेश दिइसक्दा पनि पक्रने क्रम जारी छ ।
अदालतको आदेशलाई सरकारले यसरी लत्याउँछ र कानुनअनुसारको कारवाही गर्न डराउँछ भने यस्तो सरकारलाई केको विधिको शासक भन्नु ? हो, कानुनविपरित काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । कारवाही गर्ने नाममा पटक पटक पक्राउ गर्ने र अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नु गलत हो, सरकार यही गल्ती गरिरहेको छ । व्यक्ति र शक्तिहरुलाई कानुनको बाटोमा ल्याउने, कानुनअनुसार चल्न सिकाउने सरकारको यो तरिका गलत छ ।
कि प्रकाण्डलाई अदालतमा मुद्दा सहित उभ्याउनुपर्छ, होइन भने उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरी खोरमा राख्ने जुन तरिका अपनाएको छ गृहमन्त्रालयले यसबारे प्रधानमन्त्रीले तत्काल हस्तक्षेप गरेर उनलाई रिहा गर्नुपर्छ । एउटा प्रकाण्डसँग डराउने सरकारले कसरी समृद्धि र सुशासन ल्याउन सक्छ र्?